Sida Loo Gooyo Bloggaaga Kala Badh | Martech Zone
Talaado, Febraayo 24, 2009 Axad, Juun 27, 2014 Douglas Karr
Ma badinayo qof runti waxaan jeclaan lahaa in taraafikada ay u kala gooyaan kala badh bartooda. Si kastaba ha noqotee, waa heer caadi ah tirakoobkeyga waxayna xoogaa cadaadis saareysaa barta maalin kasta.
Haddii aan kusii wado blog-ka si isdaba-joog ah, taraafiggaygu wuu korayaa - laga yaabee 100 ku-soo-booqdeyaal cusub maalin kasta bil kasta. Si kastaba ha noqotee, haddii aanan wax ku qorin hal maalin, taraafiggaygu kala bar ayuu hoos u dhacayaa. Toddobaadkii hore, waxaan ahaa mid aad u mashquul badan oo xiriiriyadayda maalinlaha ahi ay ahaayeen inta badan waxyaabaha aan ka kooban yahay - xitaa ku qasbaya saaxiibkay wanaagsan inuu ka cawdo.
Anigu ma blogging sababtoo ah content yar, sidaa darteed waxaan kaliya u baahanahay inaan naftayda dib ugu soo celiyo laxanka wanaagsan. Waxaan hayaa tanno macluumaad ah oo aan la wadaagi karo horumarka sii kordhaya ee tikniyoolajiyadda suuq-geynta ee internetka - Waxaan u baahanahay inaan anshax marin dheeraad ah ku helo waqtigeyga daabacaadda. Hareeraha ku dheji, Waxaan ku soo laabanayaa kor u kaca!
Tags: hubkaataraafikada taraafikadablogging shirkadahadaadinta taraafikada
Feb 24, 2009 markay ahayd 2:51 PM
Waan jeclahay daahfurnaanta halkan. Waxaan la yaabanahay sida ay noqon laheyd haddii stats lagu soo bandhigo bogga markasta.
Waxaan u maleynayaa in taasi ay ka shaqeyn doonto oo keliya bogagga wax soo saarka iyo goobaha dib u eegista marka la barbar dhigo baloog shaqsiyeed. Waxaan dadka u raacaa fikradooda darteed maahan tirooyinkooda. Laakiin waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la arko haddii ragga ugu sareeya taraafikada ay yihiin fikradaha ugu sarreeya.
Nasiib wacan inaad gasho laxanka. Runtii waan la halgamayaa.
Feb 24, 2009 markay ahayd 5:26 PM
Nasiib wanaag wiig dhammaad ah halkaas. Maxaa ku dhacay maalmihii dadku faafiyaan oo ay akhriyaan qoraalada maqaallada suuqgeynta muhiimka ah 24/7! Waxaan jeclaan lahaa inaan arko haddii isbeddelkaasi uu ahaa mid joogto ah dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Feb 24, 2009 markay ahayd 8:58 PM
Waxaan dareemayaa isla wax. Waxa kaliya ee aan sameyn karo? Hel dhajin! 🙂
Jul 29, 2009 markay tahay 6:32 PM
Hmmm… ..Tani waa mid gebi ahaanba cusub, waxaad dooneysaa inaad kala badh ka dhigto taraafikada.
Waxaan hayaa bog cusub,
Waxaan u baahanahay dad badan maalin kasta,
Hadaadan dan ka laheyn dadka ii wareeji redirect. :))